Shop Cashier Job at New Ever Best Trading Co.Ltd (Escort Fashion) in Mingalartaungnyunt | Accounting & Finance
Shop Cashier - New Ever Best Trading Co.Ltd (Escort Fashion) | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)
Easy Apply (New Ever Best Trading Co.Ltd (Escort Fashion)) Shop Cashier job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!
New Ever Best Trading Co.Ltd (Escort Fashion)
--New Ever Best Trading was established since year of 1999 and, we introduced the textile market to selling and distributing. Then we extend the readymade wear, that creating sewing distributing and selling by escort brand from year of 2008. New Ever Best Trading Co., Ltd started by imported textile. If we can product the garment at inter...
nally, it will be good benefit and so that we decided to extend to produce to garment by our self. Then Escort Garment factory established in January 2008. We produce the ready wear as escort brand and selling and distributing. After that we need to promote better quality effect for printing. So we founded to intend the printing factory since 2010, try the printing quality, modern that is not only for escort garment but also other garment factories with serve to best performance.- Show more >
• ငွေကြေးဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားများကို တိကျသေချာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
• Stock အဝင်အထွက် စာရင်းများအား တိကျစွာဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
• ပစ္စည်းစာရင်း Data များ၊ Shopping Bag များ၊ Catalogue စာရင်းများ၊ Transfer ရွှေ့ခြင်း၊ Customer Record မှတ်ခြင်း၊ နေ့စဉ်အရောင်း Data များ ဖြည့်စွက်ခြင်း စသော စာရင်းနှင့်ပတ်သက်သည်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။...
r>• Customer Relationship ကောင်းမွန်စေရန် ၎င်းတို့ Order တက်သော၊ လိုချင်သော ဒီဇိုင်းများအား မြန်မြန်နှင့် တိတိကျကျရစေရန် စီစဉ်ပေးရခြင်း။• -Customer များအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း။ Show more >
• တက္ကသိုလ် တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။
• အသက် (၁၈)မှ (၃၀)အတွင်း ရှိရမည်။
• ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
• ရိုးသားကြိုးစား၍ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
• ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ၊ Customer Service ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
• သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။
• သက်မှတ်ထားသော အလုပ်ချိန်အား ဆင်းေ...
ပးနိုင်ရမည်။• အလုပ်ချိန်(၂) ဆိုင်းရှိသည်။• မနက်(၉) နာရီ မှ ညနေ (၅) နာရီအထိ / နေ့လည် (၁)နာရီ မှ ည (၉) နာရီအထိ• အလုပ်ချိန်အား အလှည့်အပြောင်းရှိသည်။ Show more >
• Salary is negotiable.
Room-8, Hnin Si Street5Yangon Mingalar Taung Nyunt Township Myanmar,Yangon, Myanmar
Job Category: Accountancy Jobs
Job posted: 16/6/2020
JobsInYangon.com -3weeks ago